कोरोना रोकथामका लागि प्रदेश २ मा बढाइयो सतर्कता - मधेस - कान्तिपुर समाचार
कोरोना रोकथामका लागि प्रदेश २ मा बढाइयो सतर्कता
चैत्र १३, २०७७ श्यामसुन्दर शशि
जनकपुर — कारोना संक्रमण फैलिन नदिन प्रदेश–२ स्थित स्वास्थ्य निर्देशनालयले मातहतका स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई निर्देशन जारी गरेको छ । गत आइतबार पर्सामा कोरोना संक्रमित फेला परेपछि कोरोनाको दोस्रो चरण आउन सक्ने अनुमान गरी यस्तो निर्देशन जारी गरिएको हो ।
प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशक विजयकुमार झाका अनुसार चैत ९ गते प्रदेश भित्रका सरोकारवालाहरुको बैठक बसी मातहतका अस्पताल र हेल्थ पोष्टहरुलाई जनस्वास्थ्यका विधिहरु अपनाउन तथा आआफ्ना स्वास्थ्य संस्थामा तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन जारी गरिएको हो ।
‘होलीमा सामूहिक जमघट बढ्छ । पर्व मनाउन भारतबाट पनि धेरै जना फर्किन्छन् । यस्तोमा संक्रमण बढ्न सक्छ । प्रथम चरणमा जनस्वास्थ्यका विधिहरु अपनाउन निर्देशन दिएका हौं’ झा कान्तिपुरसँग भने ।
होलीपछि मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको प्रदेशस्तरीय कोरोना नियन्त्रण तथा निर्देशन समिति बैठक बस्ने जानकारी पनि निर्देशक झाले दिए । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले प्रत्येक पालिकामा न्युनतम ५ शय्याको अस्थायी कोरोना अस्पताल निर्माण गर्न बजेट पठाइसकेको छ । सामान्य लक्षण भएका संक्रमितहरुलाई सम्बन्धित पालिकामै उपचार गर्ने रणनीति प्रदेश सरकारको छ । तर अधिकांश पालिकाले भने हालसम्म अस्थायी कोरोना अस्पताल निर्माण गरेका छैनन् ।
प्रदेश–२ का अधिकांश जिल्लामा जिल्लास्तरीय कोरोना नियन्त्रण समन्वय समितिको बैठक बसी क्वारेन्टीन र आइसोलेसन व्यवस्थापन विषयमा छलफल भएको जानकारी पनि उनले दिए ।
कोरोना जाँच गर्न प्रदेश २ का आठवटै जिल्ला अस्पतालमा आरटी पीसीआर मेसिन जडान भइसकेकोले स्वाब संकलन गर्ने समस्या नहुने उनले बताए । प्रदेश–२ मा हालसम्म १७ हजार २ सय २९ जना संक्रमित भएका छन् । तीमध्ये २ सय ९ जनाको मृत्यु भएको छ । चैत महिनामा २६ वटा संक्रमित फेला परेको उनले जानकारी दिए ।
प्रकाशित : चैत्र १३, २०७७ १८:०७
हात्तीपाइले विरुद्धको औषधि सेवन अभियान चैत २० गतेदेखि
चैत्र १३, २०७७ कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौँ — हात्तीपाइले रोग विरुद्धको औषधि सेवन अभियान यही चैत २० गतेदेखि सुरु गरिने भएको छ ।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले पत्रकार सम्मेलन गर्दै हात्तीपाइले रोग निवारणका लागि राष्ट्रिय आम औषधि सेवन कार्यक्रम यो वर्ष १२ जिल्लामा खुवाइने बताएको छ ।
झापा, धनकुटा, धनकुटा, मोरङ, बारा, लमजुङ, पर्वत, बागलुङ, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया र कैलाली गरी १२ जिल्लामा आम औषधि सेवन गराइँदैछ ।
अभियानमा ५४०० जना स्वास्थ्यकर्मीहरू तथा ९५०० जना महिला स्वास्थ्य स्व्यंसेविकाहरु परिचालित हुँदैछन् । ७० लाख ४५ हजार जनसंख्या लक्षित गरी १२ जिल्लामा औषधि अभियान सञ्चालन हुन लागेको हो ।
महाशाखाका निर्देशक डा कृष्ण पौडेलले औषधिप्रति गलत धारणाले अभियान पूर्ण रुपले विस्तार गर्न चुनौती भएको बताए । उनले आम औषधि सेवन अभियान र बिरामी नक्सांकन तथा व्यवस्थापनमा १८ करोड ६१ लाख ५० हजार बजेट बिनियोजन गरिएको जानकारी गराए ।
हात्तीपाइले रोग कस्तो हो ?
हात्तीपाइले रोग मानिसलाई नराम्रो गरी शारीरिक रूपमा अशक्त, असमर्थ तथा अपांग बनाउने एक सरुवा रोग हो । यो रोग एक प्रकारको मसिनो धागो आकारको जुका जस्तै परजीविले गराउदँछ । यो रोग संक्रमित पोथी लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने गर्दछ। मानिसको शरीरमा यो परजीवि प्रवेश गरेको केही वर्ष पछि मात्र यस रोगका लक्षणहरू देखिने हुन्छ र यस रोगको लक्षण देखिसकेपछि निकी पार्न सकिँदैन ।
हात्तीपाइले रोगको परजीवि मुक्त हुन के गर्ने ?
नेपाल सरकारले रोग प्रभावित जिल्लाहरूमा प्रत्येक वर्ष सञ्चालन गर्ने आम औषधि सेवन कार्यक्रममा सहभागी भइ वर्षको एकपटक लगातार ६ वर्षसम्म हात्तीपाइले रोग विरुद्धको औषधि सेवन गर्नुपर्छ ।
हात्तीपाइले रोग विरुद्धको औषधि क–कसले सेवन गर्नुपर्दछ ? कसले हुँदैन ?
आम औषधि सेवन कार्यक्रम सञ्चालन हुने जिल्लाहरूमा बसोबास गर्ने औषधि सेवन गर्न योग्य सबै व्यक्तिले यो औषधि सेवन गर्नुपर्दछ ।
दुई वर्ष उमेर पुगेका बालबालिका, गर्भवती र सात दिन सम्मका सुत्केरी तथा सिकिस्त बिरामीहरुले यो औषधि सेवन गर्नु हुँदैन ।
हात्तीपाइले रोग विरुद्धको औषधि सेवन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने केही कुराहरू के छन् ?
यो औषधि खाली पेटमा खानुहुँदैन । शरीरमा हात्तीपाइले रोगको परजीवी भएका व्यक्तिहरुमा हात्तीपाइले रोग विरुद्धको औषधि सेवन गरेपछि सामान्य खालको टाउको दुखाइ, वाकवाकी लाग्ने तथा पेट दुख्ने हुनसक्छ । यदि त्यसो भएमा औषधिले प्रभावकारी काम गर्दछ भने बुझ्नु पर्दछ । ती लक्षणहरु केही घण्टाभित्रमा आफै हराएर जाने हुन्छ । केही गरी ती लक्षण लामो समयसम्म रहिरहेमा नजिरको स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक सल्लाह र उपचारका लागि सम्पर्क गर्नुपर्दछ ।
प्रकाशित : चैत्र १३, २०७७ १७:५६
वीरगन्जमा २ दिनमा ३ संक्रमितको मृत्यु
वन्यजन्तु मार्न सिकारी सक्रिय
परीक्षण नै गराउँदैनन् बिरामी
पर्सामा चालकसहित २१ ट्र्याक्टर नियन्त्रणमा
पर्सामा ओरालो लाग्दै कोरोना संक्रमण